Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Crazy Samurai' dia manana 77-min voalohany manerantany. Hetsika horonantsary hetsika iray
by Timothy Rawles Janoary 11, 2021
by Timothy Rawles Janoary 11, 2021 77,719 hevitra
Ikonon'ny haiady japoney Tak Sakaguchi (Mifampitaha amin'ny, Mitsangàna ny tovovavy masinina) mahazo faktiora ambony amin'ny sarimihetsika Crazy Samurai: 400 vs. 1. Ity ambany ity ny tranofiara. Ity sarimihetsika ity dia kasaina hatao amin'ny laharana voalohany amin'ny streamer arts martial HI-YAH! ny 12 Febroary 2021, alohan'ny fidinan'ny Digital, Blu-ray, ary DVD ny 2 martsa manomboka amin'ny Well Go USA Entertainment.
Araka ny fampitam-baovao:
“Ny zava-dehibe amin'ity horonantsary miavaka ity dia ny fizotran'ny hetsika maharitra 77 minitra tao anatin'ny fotoana iray nitohy, 'marathon battle [izay] mifanohitra amin'izay nafanaina sary an-tsary' (Forbes). Tale Yuji Shimomura (Fahitana fahafatesana, Re: Teraka) dia namorona zava-bita mahatsikaiky tamin'ny choreography momba ny hetsika tany Sakaguchi, izay milalao sabatra malaza indrindra ao Japon - Miyamoto Musashi (1584-1645), mpiady tsy resy tao anatin'ny délie 60 voarakitry ny kely indrindra — rehefa nandray ny adiny sarotra indrindra izy. ”
Inty ny synopsis Crazy Samurai: 400 vs. 1:
Rehefa tonga ny samurai tompony hamely ilay dojo Yoshioka mahamenatra, dia niditra am-otrika izy. Ao anaty filma mihetsika iray mahavariana sy mihetsika iray, Miyamoto Musashi (Tak Sakaguchi) dia niady ho an'ny ainy tamin'ny mpiady 400, nahazo toerana teo amin'ny tantara ho Crazy Samurai Musashi.
SAMURAI CRAZY: 400 vs. 1 manana fe-potoana maharitra eo amin'ny 92 minitra ary tsy naoty.